Guadalest, Alicante ပြည်နယ်ရှိအိပ်မက်မြို့တစ်မြို့ | ခရီးသွားသတင်း
ဂွာတာလတ်စ်သည်အထူးခြားဆုံးနှင့်လှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် Alicante ပြည်နယ်။ ၎င်းသည်ဒေသ၏ဒေသတွင်တည်ရှိသည် Marina Baja, အဘယ်သူ၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ် Villajoyosaဒါပေမယ့်ကမ်းရိုးတန်းမရှိဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးasရိယာအတွင်းရှိအရေးအကြီးဆုံးအမြင့်များဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည် Sierra de Aitana ၏လှိုင်း အဆိုပါXortà.
ကြေငြာခဲ့သည် သမိုင်း - အနုပညာ Complex 1974 ခုနှစ်တွင် Guadalest လည်း၏ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် စပိန်ရှိအလှဆုံးမြို့များ။ ၎င်း၏အထင်ကြီးလောက်သောရဲတိုက်ကြီး၏လွှမ်းမိုးမှုခံထားရသောအိမ်ဖြူတော်လမ်းကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းကာပြတိုက်များသို့လည်ပတ်ခြင်းကသင့်အားထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်ပိုကောင်းသိလိုလျှင် အဆိုပါ Castell က de Guadalestဤမြို့ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်သည်နှင့်အမျှသင့်အားဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
1 အဘယ်အရာကို Guadalest တွင်ကြည့်ရှုပါ
1.1 Guadalest ၏ရဲတိုက်
1.5 Guadalest ၏ပြတိုက်
2 Alicante မြို့မှာဘာလုပ်ရမလဲ
3 Guadalest မှာဘာစားရမလဲ
5 Guadalest ကိုသွားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကဘာလဲ
အဘယ်အရာကို Guadalest တွင်ကြည့်ရှုပါ
အပြင်က၎င်း၏ကမ်းလှမ်းသောအထင်ကြီးအမြင်များခံစားမှ အမြင်Guadalest တွင်သင့်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောheritageရာမအမွေအနှစ်နှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အလီကန့်တန့်မြို့မှာဘာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ပြမယ်။
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် san jose ၏ရဲတိုက်, XNUMX ရာစုကနေဟောင်းမွတ်စလင်ခံတပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့၏အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်တည်ရှိပြီးအလယ်ခေတ်တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကဲ့သို့ငလျင်နှင့်ပconflictsိပက္ခနှစ်ခုသည်လက်ရှိအခြေအနေကိုပျက်စီးစေသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျသူ၏ရုပ်ကြွင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
၏ Canon အောက်ပါ XNUMX ရာစု၌တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဘရာဇီး၎င်းသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ cupola နှင့် transept ကိုဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်ပျက်စီးမှုများကိုလည်းခံစားခဲ့ရသည်။ အတွင်းပိုင်းသူတို့တစ်တွေအဖိုးတန်မီးမောင်းထိုးပြ ကျောက်စိမ်း cabinetmaker အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့သည် ဟိုဆေးမာရီယာ Moya နှင့်ပန်းချီဆရာ David သင်းအုပ်ဆရာ။ ချာ့ချ်၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ယေရှုခရစ်၏ကြေညာချက်နှင့်ဘဝကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Guadalest ရှိအဓိကမြင့်သောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၆၄၄ မြေငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းသုံးရာလုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့သောOrduñaမိသားစု၏အမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာလက်ရှိတစ် ဦး ၏ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ် မြူနီစီပယ်ပြတိုက် ၎င်းတွင် ၁၉ ရာစုပရိဘောဂများ၊ ၁၈ ရာစုပန်းချီကားများ၊ ကြွေပြားများ၊ မြေပုံများ၊
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ Guadalest Town Hall ၏မြေညီထပ်တွင် ၁၂ ရာစုအကျဉ်းထောင်ဟောင်းသို့လည်းသင်သွားရောက်နိုင်သည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဒေသခံပြတိုက်များအကြောင်းပြောဆိုရန်ပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့်အလယ်ခေတ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုအထူးရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီ Alicante မြို့ရဲ့ကြီးမားလှတဲ့အလှတရားနဲ့အတူဘယ်လောက်များများအံ့သြသင့်သလဲ စပ်စုပြတိုက် visit ည့်သည်မှကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ သမိုင်းဝင်အလယ်ခေတ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့် Casa Orduñaကဲ့သို့သောအရာများနှင့်အတူ။ သို့သော် ပို၍ ပင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အခြားသူများရှိသည်။
ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် microgiant ပြတိုက်, သင်သည်အံ့သြဖွယ် thumbnails တွေ့နိုင်ပါသည်သော။ ဥပမာအားဖြင့် Goya ၏ 'မေလ ၂ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်မှုများ' သည်ဆန်စပါး၊ pin ၏ခေါင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောနွားထီးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်အပ်၏မျက်လုံးအတွင်းရှိ Statue of Liberty အားလုံးအနုပညာရှင်များ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြသည် Manuel Ussáပါ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး microminiaturists တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
မနည်းစပ်စုသည် ဗက်လင်မြို့ပြတိုက်နှင့် Dollhouses ကစားစရာအဟောင်းများနှင့်ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာမွေးရာပါမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထိုအတူတူပင်နိုင်ပါသည် ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Shaker ၏ပြတိုက်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၈၀၀ မှစတင်ခဲ့သောအပိုင်းနှစ်သောင်းကျော်ပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အညီအမျှလှပသောဖြစ်ပါတယ် ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုပြတိုက်အတိတ်ကာလ Guadalest ချိုင့်၌နေသောသူများ၏ဘဝကိုထပ်မံဖန်တီးပေးသော။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်ပုံမှန်ဝတ်စုံများ၊ ပရိဘောဂများနှင့်အသုံးအဆောင်များသည်ဤနေရာ၌ပြသသောအရာများကိုပြုလုပ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ပြတိုက်သမိုင်းယာဉ်များစုဆောင်းခြင်း သင့်ကိုလှပတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဆိုင်ကယ်နှင့်စပျစ်သီးကား ၁၄၀ ကိုပြသသည်။ ဤနေရာ၌အပ်ချုပ်စက်များ၊ တယ်လီဖုန်းများ၊ ရေဒီယိုများနှင့်ကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့သောအတိတ်၏အခြားအပိုင်းများကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Alicante မြို့သည်၎င်း၏အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်များနှင့်ပြတိုက်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအပြင်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် တောင်တက်သမား။ လမ်းကြောင်းများစွာမှလမ်းများစတင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တက်သွားသော Xortàထိပ်သီးအစည်းအဝေး အဆိုပါ Cerro က de los Parados ဖြတ်သန်း။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဦး ဆောင်သောတ Castell de Castell.
နှစ် ဦး စလုံးလမ်းကြောင်းသည်အထိတစ်ခရီးစဉ်မျှဝေပါ Loma del Blocón, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်တ ဦး တည်းမှပေါ်တတ်၏ Yew စမ်းရေတွင်းအခြားသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Castell de Castells သို့ရောက်သောအခါ၎င်းကိုသင်မြင်နိုင်သည် Arcs .ရိယာ နှင့်ဂူပန်းချီကားများ Pla de Petracos.
ဤပြင်းထန်သောတောင်တက်လမ်းကြောင်းများပြီးနောက်သင်၏အစာစားချင်စိတ်သည်တိုးတက်လာလိမ့်မည်။ Valencian Community ၏မြို့တွင်သင်၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများကိုပူဇော်သောစားသောက်ဆိုင်များရှိသည်။
သူတို့ထဲကတချို့ဟာဖြစ်ကြသည် turnips နှင့်ပဲနှင့်အတူဆန်အဆိုပါ ငရုတ်ကောင်းကျပ်အဆိုပါ ယုန် ali oli နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ ပိုအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် olleta က de blatဂျုံ၊ ဝက်သား၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့, နင် ၎င်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးများနှင့်ချဉ်သီးများပါသည့်ပီဇာတစ်မျိုးဖြစ်သည် ပြောင်းဖူးဘောလုံး သူတို့ဟာအသားမရှိပေမဲ့အာလူးတွေ၊ ပေါင်မုန့်တွေနဲ့ကြက်ဥတွေကိုချက်ပြုတ်ကြပေမယ့်သူတို့ဟာ meatballs နဲ့ဆင်တူတယ်။
အဲဒီမှာပေမယ့် ဘတ်စ်ကားလိုင်း Alicante မြို့ကိုရောက်တဲ့အထိအဲဒီကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကကားနဲ့သွားတာပါ။ သင်ခရီးသွားခဲ့လျှင် Benidorm သို့မဟုတ် Alcoy နှင့် Cocentaina မှသင်သွားရမည့်လမ်းသည် CV-၇၀။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် Altea မှခရီးထွက်လျှင်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသည်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည် CV-၇၀.
Guadalest areaရိယာသည်ရာသီဥတုအမျိုးအစားရှိသည် မြေထဲပင်လယ်နူးညံ့သောဆောင်းရာသီနှင့်ပူသောနွေရာသီတို့ဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မြို့သည်အမြင့်ခြောက်ရာနီးပါးအမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးတောင်များဖြင့်ဝိုင်းရံထားသဖြင့်ရာသီဥတုမှာအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဆောင်းရာသီများသည်အေး။ နွေရာသီတွင်အပူနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် Guadalest သို့သင်အလည်အပတ်ရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် နွေရာသီ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သြဂုတ်လလယ်တွင်၎င်းတို့၏ ပွဲတော်များ ၏ဂုဏ်အသရေအတွက် အဆိုပါယူဆချက်၏အပျိုကညာမြို့ပို။ ပင်ကာတွန်းကားသော။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ Guadalest သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်လှပသောကျောက်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏ရဲတိုက်ကြီးစိုး။ လှပသောပြတိုက်များနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုသင်ထူးကဲကောင်းမွန်သော gastronomy တစ်ခုထည့်ပါကသင်၏လည်ပတ်မှုကိုအံ့သြစရာဖြစ်စေရန်သင့်တွင်ပါဝင်သောအရာအားလုံးရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ဆွေမျိုး » Guadalest